Ummah | မွတ်စ်လင်ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ, Azan, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အစ္စလာမ့် Apps ကပ » Ummah - မွတ်စ်လင်ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ, Azan, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် & Qibla
Ummah - မွတ်စ်လင်ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ, Azan, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် & Qibla APK ကို
သင်တစ်ဦး, မာနထောင်လွှားလှုံ့ဆော်မှု & လေးစားမှုမွတ်စလင်ဆက်လက်ရှိနေရန်လိုလျှင်သင်လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောအစ္စလာမ်ဘာသာ app ကို! မိတ်ဆက်ခြင်း Ummah, သင့် All-In-One မွတ်စလင်ပလက်ဖောင်းနှင့်သင်လေ့လာသင်ယူရန်ကူညီပေးနေလူမှုရေးမွတ်စလင်ညီအစ်ကိုများ, ရှယ်ယာ, ပူးပေါင်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမူဆလင်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်, အချိန်မရွေး။
အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသော Muslim app ထဲတွင်
Ummah သင်တိကျအစ္စလာမ့်ဆုတောင်းပဌနာအချိန်သတိပေးကြောင်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို virtual လက်ထောက်ဖြစ်ပါသည်, နောက်ဆုံးပေါ်အရေးကြီးသောသတင်းများ, အတွေး, ဆောင်းပါးများ, အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်ပတ်သက်သောဘလော့ဂ်များနှင့်အများကြီးပိုဖတ်ပါ။ ရုံ Ummah built သောတစ်ခုတည်းသောစုံဆုံးနှင့်အခမဲ့မွတ်စလင်အစ္စလာမ်ဘာသာပလက်ဖောင်းသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
အမြဲတမ်း qibla ဦးတည်ချက်တွေနဲ့သင့်တည်နေရာအဘို့အသေးစိတ်များနှင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်ဆုတောင်းပဌနာကြိမ်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းပဌနာအချိန်မွတ်စလင်ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ပါနှင့်အတိအကျနေ့နှင့်သင့်မြို့အဘို့အသေးစိတ်အချိန်ကိုတစ်ရက်နှင့်သင်၏ Fajr, နေထွက်, Dhuhr, Asr, Maghrib နှင့် Isha'a အခါငါသိ၏။
အာရုံစူးစိုက် & Inspiration မှာနေဖို့
Ummah သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌အမြဲကြောင်းကိုသင်၏အမူဆလင် App ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို virtual လက်ထောက်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးအပေါ်မှီခိုဖို့ပခုံး, သင်ယူဖို့လိုလားသောတဦးတည်းများအတွက်ဆရာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားသောဘာသာတရားတစ်ခုသတိပေးခကျြ, ဖြောင့်လမ်းကြောင်းအပေါ်တစ်ဦးလမ်းပြ, တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးစဉျးစားကွညျ့; ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝသို့ဆောင်ခဲ့ ... Ummah အဆိုပါ akhirah တိုးတက်လာဖို့ထူးခြားတဲ့လမ်းပါ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆောင်းပါးများ, အရိပ်အမြွက်, အကြံပေးချက်များနဲ့ content အခမဲ့အဘို့သင့်ကို Mobile ဖုန်းသို့အပျတျောမူပါ။
connectivity, SHARE, DISCOVER စကား
ကြီးစွာသောအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမချီးမွမ်း, အစ္စလာမ့်အသိုင်းအဝိုင်း join, အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူချိတ်ဆက်အားဖြင့်သင့်မွတ်စလင်ညီအစ်ကိုများကိုချဲ့ထွင်ခြင်း, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အနေဖြင့်သတိပေးချက်များကိုဖတ်, ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်လှပသောမွတ်စလင်ဘာသာရေးနှင့်နေ့စဉ်ဆုတောင်း, ငါတို့ချစ်သောတမန်တော်မြတ်၏စကား, မွတ်စ်လင်အားလပ်ရက်သင်သတိပေးပါစေ အစ္စလာမ့် bro နှငျ့ညီပိုပြီးအများကြီးပို။
•သင့်တည်နေရာအပေါ်အခြေခံပြီးတိကျမှန်ကန်သောဆုတောင်းပဌနာကြိမ်, မရရှိနိုင်မျိုးစုံ setting များကိုလည်းပါဝင်သည်
ဿွာန်ပုံပြင်• - သင်ဥပုသ်လ၏လစဉ်ကာလအတွင်းသင်၏အစာရှောင်ခြင်းအားခြေရာခံနိုင်ပါတယ်အလွန်ကြည်နူးဖွယ်လမ်းထဲမှာ။
• Qibla - ဖြစ်နိုင်သောအများဆုံးအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အပြန်အလှန်လမ်းအတွက် Qibla ဦးတည်ချက်ရှာမည်
•အသိပေးချက်များ - ဤအပိုင်းအစကိုသင်ပိုမြန် Ummah သင်တို့အဘို့အထောကျအကူပွုဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်သောအရာများအတွက်သတင်းပေးရကူညီပေးပါမည်။
• Widgets - ညာသင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာ။ သငျသညျအစဉ်အမြဲ (setting တွင်ပြုလုပ် enable) ပဌနာကြိမ်သတိရနိုင်အောင်သင်ပြုသောပဌနာ-ကြိမ်ညာဘက်သတင်းအချက်အလက်ပေးသည်ဘယ်လိုလမ်းအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသောအတွက်ထူးခြားတဲ့ကျနော်တို့နှစ်ခုဝစ်ဂျက်များနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောအကြောင်းကြားစာဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေး - ဒါဟာ Ummah အတွင်းပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်နဲ့သင့်ရဲ့ဒေတာ personalize ဖို့အချိန်င်
•ဖိုင်း - ဒါဟာ Ummah အတွင်းပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်နဲ့သင့်ရဲ့ဒေတာ personalize ဖို့အချိန်င်
• Read နေ့စဉ် Ayah (ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အနေဖြင့်), (တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်၏) Hadith (ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပညာရှင်များထံမှ) Quote & အသနားခံ။
•အကြာတွင်ဖတ်ရှုဖို့နေ့စဉ်အကြောင်းအရာ Save ။
•ရရှိနိုင်သောဘာသာစကားများ: အင်္ဂလိပ်, & လျဘေးနီးယနျး။
အစ္စလာမ်ဘာသာ Love? ထိုအခါသင်သည်ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ် Ummah!
Ummah နှင့်သင်၏အချိန်လေးကိုပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသောလုပ်ပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေနှင့်ကမ္ဘာပျော်ရွှင်စေ!
ကျနော်တို့က feature အသစ်အနေနဲ့စိတ်ကူးရှိသည် ... နားထောင်ခြင်းနေကြသနည်း
ကျွန်တော်တို့ကိုသိပါစေနှင့်ကျနော်တို့လာမယ့် update ကိုမှထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
•သင် app ကိုသငျသညျမှားယှငျးပဌနာသကြိမ်ပေးခြင်းသည်အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်သင့်ရဲ့ settings ကိုဆက်စပ်သောကြောင်းခံစားရလျှင်။
သင်တစ်ဦး bug ကိုတွေ့ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီလိုပါလျှင်•ကိုရေးလိုက်ကျေးဇူးပြုပြီး hello@ummah.io
Ummah - မွတ်စ်လင်ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ, Azan, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် & Qibla
25.55 ကို MB
Ummah Technologies က